ရွှေအိမ်စည်ရဲ. အလန်းစား ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ပုံရိပ်များ…. – Shwe Naung
N N | March 29, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်လ်ရွှေအိမ်စည်ကတော့ အနုပညာ လောကမှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူထား နိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ ချစ်အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး
​ ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းကာ ရင်ခုန် စရာကောင်း လွန်းတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင် လျက်ရှိနေတဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရယူ ထားနိုင်တဲ့ သူမ ကတော့ ဖိတ်ကြား ခံရတဲ့ ပွဲတွေ ကိုလည်း တက်ရောက် လျက်ရှိ နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေပြီး ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူး လျက်ရှိနေတဲ့ သူမ ကတော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေမှာလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင် လျက်ရှိနေခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းစွာ စကားပြော ဆိုတတ်ပြီး အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ကြွေလောက် စရာကောင်း လွန်းတဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေး တွေကိုလည်း အားပေးတဲ့ ပရိသတ် တွေအတွက် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်တင် ပေးလေ့ ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိလှပနေပြီး မြင်ရသူ ပရိသတ်တွေကို ကြွေသွား စေမယ့် ပုံရိပ် လေးတွေကို ထုတ်ပြ လိုက်ပါတယ်။
သူမကတော့ ” No bra day “ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ရေးသား ထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် မော်ဒယ်လ် ရွှေအိမ် စည်ရဲ့ အထာကျကျ လန်းလွန်းတဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ် လေးတွေကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပီး ရလာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အမိုက်စားလေးကို ပရိသတ်ကို ချပြလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……